Nanonofy izy | NewsMada
Miditra amin’ny herinandro fahatelo amin’ny volana voalohan’ny taona 2016 sahady isika. Mihazakazaka ny fandehan’ny andro, tsy hitahita akory, efa hisasaka sahady izy ity. Tao anatin’izany firimorimon’ny fiainana izany, resin-tory ity vahiny iray ka nanonofy. Hafahafa ilay izy, satria nanonofy nahita firenena kely iray mitokana, voahodidin’ny ranomasina. Tsara tarehy ny tanàna, ary miaina am-pilaminana ny mponina ao aminy. Feno zavaboahary mampiavaka azy, tsy fahita eran’izao tontolo izao, ilay firenena. Finaritra mihitsy ilay vahiny, nitety ny faritra isanisany, nandeha nilamina tamin’ny fiara nitondra azy.
Tampoka teo, nitsamboatra izy fa nitsatoka tampoka, tao anaty lavaka, ilay fiara ka tsy afa-nihetsika intsony. Ilay fitsangantsanganana anefa, tsy mbola vita ka voatery nanohy ny fitsidihany an-tongotra ilay vahiny. Gaga sy zendana anefa izy fa niova tanteraka ny endrik’ilay firenena. Fako misavovona sy vahoaka mitsindroka no hitan’ny masony. Fofona maimbo tsy laitra, niainan’ny orony ary tabataba sy antsoantso mitoreo vokatry ny hanoanana sy tsy fisian’ny fandriampahalemana no ren’ny sofiny. Variana tanteraka izy mahita ireo mpitondra sy mpanohitra, misintona sy mandrioritra ambony ambany ity firenena maha tehonina, fahiny, ity.
Rehefa lasa ambiroa teo izy, taitra tampoka ary nihorakoraka mafy fa nisy nanafika sy nanendaka. Vonjeo rey olona â! Lasany ny findaiko sy ny poketrako, misy ny “euro” sy “dollar”. Vonjeo ê! Tsy nisy namonjy nefa izy fa nitsipatsipaka teo ambony fandriana fotsiny. Nahirany ny masony avy eo, nojereny faingana ny entany ka gaga izy fa tsy very akory ny findainy sy ny vola “euro” sy “dollar”. Teo izy vao tonga saina fa hay nofy ilay izy.
Tiany hotohizana amin’ny torimasony manaraka ilay nofy, saingy tsy fantany ilay fotoany hahatongavan’izany.